အလှအပ – Page2– My Doctor
DrMay ThantSyn	2019-03-05T09:01:25+00:00	March 5th, 2019|Categories: All Articles, အလှအပ, အလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ, နေထိုင်မှုပုံစံ|
အပျိုကြီးဖြစ်လို့ နှုတ်ခမ်းခြောက်တာလား? တစ်ဆိတ်ရှိ ဒီအပျိုကြီးတွေပဲ ထိခိုက်ခံနေရတာပါပဲ။တကယ်တော့ အပျိုကြီးဖြစ်လို့ နှုတ်ခမ်းခြောက်တာမဟုတ်သလို နှုတ်ခမ်းခြောက်လို့ အပျိုကြီးဖြစ်တာလဲ မဟုတ်ရပါဘူး။ ဒါဆို ဘယ်သူတွေမှာ နှုတ်ခမ်းခြောက်လဲ? ကျား/မ၊ အပျို/အအို၊ ကလေး/လူကြီးမရွေး လူတိုင်းနှုတ်ခမ်း ခြောက်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအရာတွေက နှုတ်ခမ်းခြောက်ခြင်းကို ပိုဖြစ်စေသလဲ? ၁)ရေဓါတ်နည်းခြင်း။ ၂)လျှာဖြင့်နှုတ်ခမ်းအား ခနခနလျက်ခြင်း။ ၃)နေလောင်ခြင်း၊ဆောင်းတွင်းရာသီဥတုနှင့်ထိတွေ့ခြင်း။ ၄)ပါးစပ်ဖြင့် အသက်ရှူခြင်း။ ၅)အာဟာရ၊ဗီတာမင် ပြည့်ဝစွာမစားခြင်း။ ၆)ကောင်းမွန်သော အဆီများ လုံလောက်စွာမစားခြင်း။ ၇)နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေး/သွားတိုက်ဆေးများနှင့် မတည့်ခြင်း။ ၈)အချဉ်၊အငံ၊အပူအစပ်များ အစားများခြင်း။ နှုတ်ခမ်းကွဲခြင်းကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ? ၁)နှုတ်ခမ်းကို လျှာဖြင့်ခနခနလျက်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ။တံတွေးဟာ အငွေ့ပျံမှုမြန်ဆန်ပြီး နှုတ်ခမ်းသားကိုပိုခြောက်စေနိုင်ပါတယ်။ ၂)Flavoured lip balmများကိုရှောင်ပါ။အနံ့အရသာများပါဝင်သော lip balm များဟာ နှုတ်ခမ်းသားကို ပိုမိုခြောက်သွေ့စေပါတယ်။ ၃)နေလောင်ဒဏ်ကိုရှောင်ပါ။နေပူထဲထွက်လျှင်